Akụkọ Alexander García-Tobar na Martech Zone |
Edemede site na Alexander García-Tobar
Onye ọchụnta ego na onye isi ụwa, Alexander bụ onye isi ala na ụlọ ọrụ abụọ gara aga ma na-agba ọsọ otu ahịa ahịa ụwa maka ụlọ ọrụ atọ gara IPO. Ọ nwere ọkwa nyocha na onye isi na ụlọ ọrụ nyocha dị ka The Boston Consulting Group na Forrester Research yana mmalite Silicon Valley dị ka ValiCert, Sygate, na SyncTV.
Ihe kpatara ịzụ ahịa na otu IT kwesịrị ịkekọrịta ọrụ nchekwa cyber
Fraịde, Jenụwarị 21, 2022 Fraịde, Jenụwarị 21, 2022 Alexander García-Tobar
Ọrịa ọjọọ ahụ mere ka mkpa ngalaba ọ bụla dị n'ime otu ụlọ ọrụ tinyekwuo anya na nchekwa cyber. Nke ahụ nwere ezi uche, nri? Ka teknụzụ anyị na-eji na usoro anyị na ọrụ anyị kwa ụbọchị, ka anyị nwere ike ịdị mfe karị na mmebi. Mana nnabata nke omume nchekwa cyber ka mma kwesịrị ịmalite site na ndị otu azụmaahịa maara nke ọma. Cybersecurity abụrụla nchegbu maka ndị isi teknụzụ Ozi (IT), ndị isi nchekwa nchekwa ozi (CISO) na ndị isi teknụzụ (CTO)